Sawirro: Muungaab iyo Jeneraal ka tirsan Amisom oo isla buneystay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab’’ iyo Taliye ku-xigeenka Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM Jeneraal Muhuusi ayaa kulan ku yeeshay xarunta Maamulka Gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho
Gudoomiyaha ayaa ugu horeyn warbixin ka siiyay Taliye ku-xigeenka ciidamada AMISOM howlaha ammaanka ee caasimadda Muqdisho iyo horumarka laga sameeyay, iyadoo intaasi kaddib ay labada mas’uul kulankooda kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta amniga caasimadda, wada shaqeynta ka dhexeysa AMISOM, Maamullada degmooyinka iyo tan Maamulka Gobolka iyo xakameynta hubka sharci darrada ah.
Xasan Muungaab, Guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Taliye ku-xigeenka AMISOM Jeneraal Muhuusi oo kulan qada ah wada qaatay oo uu guddoomiyuhu u sameeyay taliye ku-xigeenka ayaa waxay kaloo isla soo hadal qaadeen dadaalada uu maamulka Gobolka ugu jiro dib u dhiska xarumaha danta guud ee loogu adeegayo bulshada.
Gudoomiye Muungaab iyo Jeneraal Muhuusi ayaa isla buneystay, iyadoo horay Muungaab sidan oo kale uu horaantii bishii May 2014 uu bun ugu dubay Madaxada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya danjire Nickolas Kay.
Taliye ku-xigeenka AMISOM ayaa dhankiisa balan qaaday in uu gacan ka geysanayo xoojinta nabadgelyada caasimadda iyo ka shaqeynta horumarka ay iminka ku talaabsatay.
Jeneraal Muhuusi ayaa shacabka ka dalbaday inay sii labo jibaaraan taageerada ay siinayaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, si guud ahaan magaalada looga cirib tiro Al-Shabaab.
Qodobo laga soo saaray kulan lagu xalinayey cabashada ganacsatada Bakaaraha